Raveloaritiana Mamisoa · Jona 2016 · Global Voices teny Malagasy
Raveloaritiana Mamisoa · Jona, 2016
Lahatsoratra farany an'i Raveloaritiana Mamisoa tamin'ny Jona, 2016
Eoropa Afovoany & Atsinanana 24 Jona 2016
Manana mpanjohy efa ho 13000 i Petr Zamkovoi, kanefa mbola mahita fotoana hampianarana azy momba ny asa mafy sy ny famelomana fianakaviana ihany ilay mpanao gazety Vladimir Soloviev.
Fihetsiketsehana Manerantany Mitaky Ny Rariny Ho an'ny Mpikatroka Angoley Nogadraina Herintaona Lasa Izay
Angola 23 Jona 2016
"Satria mila ny rehetra te hanampy hanorina Angola tsara kokoa ho afaka hanao izany izahay, satria tsy ady ny fihetsiketsehana,..." fihetsiketsehana fitakiana ny famotsorana ireo gadra politika.
Mitady Tonian-dahatsoratra Manana Zotom-po Hitarika Ny Fitantaram-baovao Ao Afovoany Atsinanana Ny Global Voices
Mediam-bahoaka 22 Jona 2016
Mahay tenim-pirenena roa ve ianao- na tsara kokoa, mahay tenim-pirenena maromaro-manam-pahaizana momba ny Atsinanana Afovoany sy Afrika Avaratra izay manome lanja ny rariny, ny fitoviana, ny finamanana miampita sisintany ary hita fa tsy leo aterineto? Tia miasa ao an-trano ve ianao? Mitady anao ny Global Voices!
Amerika Avaratra 21 Jona 2016